Ogandà Tourism izao dia mikendry ny Tale Jeneralin'ny Domestic Insentive Travel Drive
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Ogandà Tourism izao dia mikendry ny Tale Jeneralin'ny Domestic Insentive Travel Drive
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda
Sakafo maraina ny CEO Oganda
Ny Oganda Tourism Association (UTA) sy ny Private Sector Foundation Uganda (PSFU) dia nikarakara sakafo maraina sy fampirantiana ho an'ny CEO ny zoma 22 Oktobra 2021 tao amin'ny Hotely Kampala Sheraton.
Ny hetsika dia natao teo ambanin'ny programa COVID-19 Economic Recovery and Resilience Response Program (CERRRP).
Izany dia natao mba hamporisihana ny fitsangatsanganana amin'ny sehatry ny orinasa ao an-toerana mikendry ny lehiben'ny orinasa tsy miankina sy ny orinasa ary orinasa.
Nosokafan’ny sekretera maharitry (PS) ao amin’ny minisiteran’ny fizahantany ny zavamananaina sy ny vakoka (MTWA) Doreen Katusiime ny hetsika.
Raha niresaka tamin'ireo Lehiben'ny Mpanatanteraka sy ny fampirantiana nanatrika, na ara-batana na ara-batana, izy dia nitatitra fa ny sehatra tsy miankina dia niharan'ny fahaverezan'ny asa, ny fandroahana, ny fahaverezan'ny fidiram-bola eo amin'ny orinasa sy eo amin'ny sehatra nasionaly, ary ny fahaverezan'ny vola vahiny izay manohintohina ny fiarovana. Na eo aza izany dia hita fa vatofantsika azo itokisana ny tsena anatiny manoloana ireo fanamby ireo.
Nomarihiny fa mihamitombo ny fitsidihan'ny Ogandey amin'ireo toerana fizahan-tany isan-karazany ao anatin'izany ny valan-javaboary, Loharanon'ny Nile, amoron-dranomasina, Oganda Ny Wildlife Education and Conservation Center (UWEC), ireo nosy, ary ny fotodrafitrasa fidirana mitovy amin'izany dia nanatsara ny fironana hivezivezy ary mitombo tsikelikely ny fampiasam-bola amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny hetsika fizahan-tany ao anatin'ireo toerana mahasarika. Nanampy izy fa ny fitakiana dia tohanan'ny fitomboan'ny saranga antonony, ny fidiran'ny sehatry ny orinasa, ary ny revolisiona ICT izay nahatonga ny vaovao ho mora kokoa.
“Betsaka ny Ogandey no manana fidiram-bola tsy misy dikany sy fomba hanitarana ny mombamomba ny fandaniana. Ireo tombony tsara ireo dia taratry ny fahafahana iray izay tsy azo ampiasaina. Ny fitakiana fizahan-tany ao an-toerana dia entin'ny fitsidihana namana sy havana; fifindra-monina an-tanàn-dehibe ambanivohitra; hetsika ara-kolontsaina; ary ny lanonana ahitana fahaterahana, fanambadiana, lanonana fanombohana, sns. Lanonana mamatotra ny fiarahamonintsika ireo hetsika ireo, ary ny hetsika ara-kolotsaina taorian’ny namerenana ny fanjakana nentim-paharazana koa dia nahaliana bebe kokoa, anisan’izany ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny mpanjaka sy ny fitsidihan’ny mpitarika ara-kolontsaina ny olom-peheziny”, hoy ny PS.
Nosoritany ireo mpamily hafa amin'ny fizahan-tany ao an-toerana ao anatin'izany ny hetsika mifototra amin'ny finoana, ny malaza indrindra dia ny Fivahiniana masina maritiora Namugongo Uganda isan-taona tamin'ny 3 Jona, Kroazada Pentekotista, fihaonambe, fandrisihana, atrikasa ary fivoriana izay nanjary fitaovana mahery vaika ho an'ny fanentanana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary mpamily mandrisika hafa dia ny dia noho ny antony ara-pitsaboana, fialamboly, fiantsenana, fanabeazana ary fikarohana.
Nidera ny Master Card Foundation izy noho ny fahatongavany hanohana ny sehatry ny fizahan-tany mankany amin'ny fanarenana sy ny faharetana ary niangavy ireo lehiben'ny orinasa nanatrika ara-batana sy an-tserasera mba handray ny fitsangatsanganana famporisihana.
Ny mpandahateny fototra sady Mpanatanteraka Mpanatanteraka Mpanatanteraka ao amin'ny Fikambanana tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina Uganda (PSFU), Tale Francis Kisirinya, dia nilaza fa ny tanjon'ny fampivondronana ny sakafo maraina dia ny hamerenana indray ny fitsangantsanganana mandrisika ny taona eo amin'ireo fikambanana sy mpiasa ao Ogandà. Ao amin'ny fanamarinana azy dia nilaza izy fa noho ny fikambanan'ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy no manana fidiram-bola azo ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana.
Nampanantena izy fa ny PSFU dia hiasa mafy mba hahazoana antoka fa ny sehatra tsy miankina dia manana tontolom-pandraharahana mahasoa amin'ny alàlan'ny fanentanana, ny lobbying ary ny fikarohana momba ny fitomboan'ny orinasa maharitra. Nambarany fa ny sehatry ny fizahantany sy ny fampiantranoana dia isan’ny sehatra tena voa mafy vokatry ny valan’aretina COVID-19. Na izany aza, amin'izao fotoana izao ny sehatra dia mahita lalana fanarenana tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fepetra famehezana izay napetraky ny governemanta.
Araka ny tatitry ny MTWA, ny areti-mifindra COVID-19 dia nandrisika ireo Ogandey izay tsy afaka nandeha nitsidika toerana mahaliana tao amin'ny fireneny. Teo anelanelan'ny aogositra 2020 sy martsa 2021, dia nitombo avo telo heny ny fizahan-tany an-trano raha 21,000 ka hatramin'ny 62,000 ny mpizaha tany. Raha mandeha amin'ireo antontan'isa ireo, dia manangana isa ambony kokoa izany manomboka amin'ny martsa ka hatramin'ny desambra raha heverina fa miditra amin'ny vanim-potoana faratampony ny indostria.
Nofaritany ny fitsangatsanganana famporisihana ho valisoa na fandaharan'asa tsy fivadihana izay miendrika fitsangatsanganana karama rehetra miaraka amin'ny fandaharana hetsika sy hetsika voalahatra. Ny orinasam-panjakana sy ny orinasa tsy miankina dia mampiditra fitsangatsanganana famporisihana izay manaiky ny tombontsoa manomboka amin'ny tsy fivadihana bebe kokoa avy amin'ny mpiasa, ny fifandraisana matanjaka eo amin'ny ekipa eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa, ny fitazonana ny antony manosika, ny fanomezana tanjona, ny fifaninanana ara-pahasalamana eo amin'ny toeram-piasana, ny fampitomboana ny fahaiza-mamorona sy ny vokatra, ny famoronana asa. kolontsain'ny orinasa tsara, ary mahatonga ny orinasa ho mahasarika kokoa ny mpiasa.
Nanampy izy fa ny fitsangatsanganana famporisihana dia manana fiovana lehibe ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an'ny mpiasa sy ny toekarena izay mety ahitana ny fampitomboana ny fitomboana sy ny fisoloan-tena matanjaka, ny famoronana fitomboan'ny varotra azo refesina ary ny fiverenan'ny fampiasam-bola. Amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola ho an'ny tena, dia manome traikefa tsy manam-paharoa amin'ny mpiara-mianatra mandeha miaraka amin'ireo mpitarika orinasa izay mahomby kokoa noho ny rehefa mandeha irery izy ireo. Izy io koa dia manohana ny fahafahana mampifanaraka ny tanjon'ny orinasa, ny tanjon'ny tsirairay ary ny fanentanana marika. Ny fikarohana vao haingana dia manondro fa ny fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny marika dia mahery kokoa noho ireo mpanentana efa misy irery mitondra ny ezaka varotra.
Misy fiantraikany ara-toekarena ihany koa ny fitsangatsanganana famporisihana satria ny fitsangatsanganana ao anatin'ny toe-karena mivoatra dia manentana lehibe hamelomana indray ny toekaren'izao tontolo izao satria ny fihaonana mivantana dia mandrisika ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana ara-tsosialy. Ny trano fandraisam-bahiny mifanaraka amin'ny orinasam-pitantanana toerana eo an-toerana dia mahatsapa fiverenana tsara amin'ny fampiasam-bola sy asa mivantana ho an'ireo tanora tonga miaraka. Noho izany dia namporisika ireo tale jeneralin'ny jeneraly manatrika sy ireo parastatal ao amin'ny governemanta izy mba hametraka politika izay mandrisika ny sampan-draharaha informatika sy ny fitantanan-draharaha izay matetika atao tsinontsinona.
Nanao antso avo amin’ny fitondram-panjakana izy mba hanohana amin’ny fampivelarana sy famolavolana tondrozotra ho an’ny vokatra ara-pizahantany midadasika kokoa hamporisihana ny fifaninanana eo amin’ny sehatry ny fihaonana, famporisihana, fihaonambe sy fampirantiana (MICE), fizahan-tany fambolena, fizahan-tany mifototra amin’ny fiaraha-monina, fizahan-tany mifototra amin’ny kolontsaina, fizahan-tany ara-pivavahana, sns.
Tokony homena tsindrim-peo ny fanaovana mombamomba ireo traikefa isan-karazany mba ho azon'ny Ogandey izany ary hamorona marika nasionaly matanjaka ary hamorona fandikana tsy tapaka ny tantaran'i Ogandà manerana ny vokatra fizahan-tany isan-karazany ary hampiasa vola amin'ny fikarohana tsena.
Nisaotra ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana sy ny mpanohana azy, ny Master Card Foundation, tamin'ny nandraisany tetibola mitentina 32 miliara dolara (8.98 tapitrisa dolara) izay nankininy tamin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ity tobim-pahasalamana misy fitaovana fitiliana PCR 40,000 ity, fitaovana ho an'ny laboratoara ao amin'ny Birao Nasionaly momba ny fenitra (UNBS) ho an'ny fanamarinana ny vokatra, fandriana hopitaly, fitaovam-piarovana manokana (PPE), ary fitaovana fiarovana.
Nofaranany tamin'ny fanambarana fa ny PSFU dia miara-miasa amin'ny governemanta ihany koa amin'ny famolavolana paikady vaovao amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina hivoaka amin'ny COVID-19, ary ny fonosana dia misy ihany koa ny paikady hamerenana sy hananganana faharetana miaraka amin'ny iray amin'ireo vokatra dia ity fivoriana sakafo maraina ity. .
Midera ny famelabelaran'i Kisirinya, Peter Mwanje, RT ao amin'ny Oganda Chapter, orinasa tsy miankina iray fandrisihana, dia nilaza fa ny fandaharan'asa fandrisihana dia mety ho tafiditra amin'ny andraikitra ara-tsosialy amin'ny orinasa, ohatra ny fandokoana sekoly, na ny fandehanana any amin'ny tora-pasika, na ny adrenalinina. hetsika. Nanoro hevitra ireo mpandraharaha mpitety faritany izy mba hamorona birao mitokana ho an'ny fitsangatsanganana famporisihana, satria tsy mitovy amin'ny fihaonambe izany.
Nohamafisiny tamin’ireo tale jeneraly ihany koa fa tsy hisy fiatraikany amin’ny teti-bolan’izy ireo ny fandaharan’asa famporisihana satria ny isan-jaton’ny fidiram-bola azo avy amin’ny tombom-barotra be loatra no ampiasainy. Izy io dia mitentina 7% amin'ny asa fizahan-tany ara-barotra rehetra mitentina 75 lavitrisa dolara amerikana eran-tany.
Pearl Horreau, Filohan'ny UTA, sampana ambony indrindra ho an'ny fizahantany, fitsangantsanganana ary ny sehatry ny fandraisam-bahiny, dia niantso ireo Tale Jeneraly mba hampiasa ny fizahantany an-trano ho hery hafa hanentanana ny mpiasany amin'ny fanomezana valisoa azy ireo na dia misy fialan-tsasatra aza mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa. hanatsarana ny vokatra eny amin'ny toeram-piasana.
Ny famelabelarana dia narahin'ny seha-pifanakalozan'ireo olo-malaza indostrialy notarihin'ny Kaomisera misahana ny fizahantany ho an'ny MTWA, Viviane Lyazi. Anisan'izany ny filoha lefitry ny Oganda Tourism Board (UTB) Bradford Ochieng ary filohan'ny Association of Oganda Tour Operators (AUTO) ary mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny PSFU, Civy Tumusiime Ochieng, izay nilaza fa i Ogandà no firenena fahaefatra isan-karazany indrindra eran-tany amin'ny lafiny kolontsaina. Nilaza izy fa ny fanadihadiana nataon'ny BBC tamin'ny taona 2019 momba ireo mpila ravinahitra dia nahita fa i Oganda no firenena sariaka indrindra eran-tany. Na izany aza, ny fandalinana fanondroana fifaninanana farany dia nanome isa an'i Ogandà ho 112 amin'ny firenena 140. Raha ny lafiny fahasalamana sy ny fahadiovana dia 136 amin’ny 140 no tena olana goavana. Nanoro hevitra izy ireo fa tokony hataon'izy ireo aloha ny toerana haleha mba hahasarika sy hifaninana. Ny Civy Tumusiime dia namporisika ny tale jeneralin'ny orinasa mba hiditra ao amin'ny sarety tarihin'ny programa fizahan-tany ao an-toerana amin'ny alàlan'ny famporisihana ny mpiasany sy ny fianakaviany amin'ny dia an-trano, satria hitombo ny tanora handray ny kolontsaina.
Ny orinasa fampirantiana avy amin'ny sehatra tsy miankina dia nahitana ny National Arts and Cultural Crafts Association of Uganda, Murat Studios, Arlanda Tours and Travel, Orogu Tours, Petnah Africa Tours, Voyager African Safaris, Lets Go Travel, FCM Travel Solutions, Pristine Tours, Buffalo Safari Lodge, Papyrus Guest House, Park View Safari Lodge, Sites Travel, Gazelle Safaris, Gorilla Heights Lodge, Pinnacle Africa, MJ Safaris, Asante Mama, Go Africa Safaris, Maleng Travel, Talent Africa, ary Toro Kingdom.
November 12, 2021 amin'ny 06: 33
Tsara ny mahita an'i Ogandà mifantoka amin'ny tsena anatiny. Mila visa ny mpizahatany iraisam-pirenena mba hitsidika ary mbola feno olana ny rafitra e-visa. Tsy maintsy vahana haingana izany.